Erọn mụnyere ọkụ asaa (1-4)
E mere ka ndị Livaị dị ọcha, ha amalite ije ozi (5-22)
Afọ ole ndị Livaị na-eje ozi ga-adị (23-26)
8 Jehova gwara Mosis, sị: 2 “Gwa Erọn okwu, sị ya, ‘Mgbe ọ bụla ị mụnyere ọkụ* ndị ahụ, ọkụ asaa ahụ ga na-enye ìhè n’ihu ebe a dọsara ihe e ji adọsa ha.’”+ 3 Erọn wee mee ihe a: Ọ mụnyere ọkụ* ndị ahụ ka ha na-enwu n’ihu ebe a dọsara ihe e ji adọsa ha,+ otú Jehova nyere Mosis n’iwu. 4 Otú a ka e si rụọ ihe ahụ e ji adọsa ọkụ:* Ọ bụ ọlaedo ka e ji rụọ ya. E ji hama kụọ ya malite n’okporo ya ruo n’ifuru ya.+ A rụrụ ihe ahụ e ji adọsa ọkụ otú Jehova gosiri Mosis n’ọhụụ.+ 5 Jehova gwara Mosis okwu ọzọ, sị: 6 “Si ná ndị Izrel kpọrọ ndị Livaị, meekwa ka ha dị ọcha.+ 7 Otú a ka ị ga-esi mee ka ha dị ọcha: Fesa ha mmiri na-asachapụ mmehie. Ha ga-eji agụba kpụchaa ajị niile dị ha n’ahụ́, sụọ uwe ha, ma mee onwe ha ka ha dị ọcha.+ 8 Ha ga-akpụrụ oké ehi,+ werekwa àjà ọka ya+ na ya na-agakọ, ya bụ, ntụ ọka e gwere nke ọma a gwara mmanụ. Ị ga-akpụrụkwa oké ehi ọzọ a ga-eji chụọ àjà mmehie.+ 9 Ị ga-akpọta ndị Livaị n’ihu ụlọikwuu nzute ma kpọkọta nzukọ Izrel niile.+ 10 Mgbe ị ga-akpọta ndị Livaị n’ihu Jehova, ndị Izrel ga-ebikwasị aka ha n’isi ndị Livaị.+ 11 Erọn ga-eche* ndị Livaị n’ihu Jehova ka ha bụrụ àjà a na-efegharị efegharị+ si n’aka ndị Izrel. Ha ga na-eje ozi Jehova.+ 12 “Ndị Livaị ga-ebikwasị aka ha n’isi oké ehi ndị ahụ.+ Ha ga-achụzi otu n’àjà ka ọ bụrụ àjà mmehie, chụọkwa nke ọzọ ka ọ bụrụ àjà a na-esu ọkụ a na-achụrụ Jehova, ka e wee kpuchiere ndị Livaị mmehie.+ 13 Ị ga-eme ka ndị Livaị guzo n’ihu Erọn na ụmụ ya ndị nwoke ma chee* ha n’ihu Jehova ka ha bụrụ àjà a na-efegharị efegharị a chụụrụ ya. 14 Ị ga-esi ná ndị Izrel kpọpụta ndị Livaị. Ndị Livaị ga-abụkwa nke m.+ 15 E mechaa, ndị Livaị ga-abata jewe ozi n’ụlọikwuu nzute. Ọ bụ otú ị ga-esi mee ka ha dị ọcha ma chee* ha n’ihu m ka ha bụrụ àjà a na-efegharị efegharị. 16 N’ihi na ha bụ ndị e nyere n’onyinye, ndị e si ná ndị Izrel nye m. M ga-akpọrọ ha ka ha nọchie anya nwa ọ bụla ndị Izrel bu ụzọ mụọ.*+ 17 N’ihi na ọ bụ m nwe nwa ọ bụla ndị Izrel bu ụzọ mụọ, ma mmadụ ma anụmanụ.+ M mere ka ha dịrị m nsọ n’ụbọchị m gburu nwa ọ bụla e bu ụzọ mụọ n’Ijipt.+ 18 M ga-akpọrọ ndị Livaị ka ha nọchie anya ụmụ niile ndị Izrel bu ụzọ mụọ. 19 M ga-esi ná ndị Izrel kpọrọ ndị Livaị kpọnye Erọn na ụmụ ya ndị nwoke ka ha bụrụ ndị e nyere n’onyinye, ka ha na-ejere ndị Izrel ozi n’ụlọikwuu nzute+ ma na-ekpuchiri ndị Izrel mmehie ha, ka ihe ọjọọ ọ bụla ghara ime ndị Izrel+ maka na ndị Izrel bịara nso n’ebe nsọ.” 20 Mosis na Erọn na nzukọ Izrel niile mere ndị Livaị ihe a e kwuru. Ndị Izrel mere ihe niile e kwuru gbasara ndị Livaị otú Jehova nyere Mosis n’iwu. 21 Ndị Livaị mere onwe ha ka ha dị ọcha ma saa uwe ha.+ Mgbe ha mechara, Erọn chere* ha n’ihu Jehova ka ha bụrụ àjà a na-efegharị efegharị.+ Erọn wee kpuchiere ha mmehie ha iji mee ka ha dị ọcha.+ 22 Mgbe e mechara, ndị Livaị banyere ka ha jewe ozi ha n’ụlọikwuu nzute n’ihu Erọn na ụmụ ya ndị nwoke. Ha mere nnọọ ihe Jehova nyere Mosis n’iwu gbasara ndị Livaị. 23 Jehova gwaziri Mosis, sị: 24 “Ọ bụ ndị Livaị ka ihe a gbasara: Nwoke ga-esonye n’ìgwè ndị na-eje ozi n’ụlọikwuu nzute malite mgbe ọ dị afọ iri abụọ na ise gbagowe. 25 Ma mgbe ọ gafere afọ iri ise, ọ ga-akwụsị iso ìgwè ahụ eje ozi, ọ gaghịkwa na-eje ozi. 26 Ọ ga na-enyere ụmụnne ya ndị na-eje ozi n’ụlọikwuu nzute aka, ma ọ gaghị anọ n’ebe ahụ na-eje ozi. Ọ bụ ihe a ka ị ga-eme gbasara ndị Livaị na ọrụ ha.”+
^ Na Hibru, “ga-efegharị,” ya bụ, mee ka ha gaa ihu na azụ.
^ Na Hibru, “fegharịa,” ya bụ, mee ka ha gaa ihu na azụ.
^ Ma ọ bụ “nwa mbụ ọ bụla meghere akpa nwa.”
^ Na Hibru, “fegharịrị,” ya bụ, mee ka ha gaa ihu na azụ.